28th Oct 2010–MoeMaKa Daily Newsletter
saveSave 28th Oct 2010–MoeMaKa Daily Newsletter For Later
Burmese Water Resources and the World - paper - Maung Kyay Yay, MoeMaKa
Insein Monks Conference - Rangoon, 27th March 2013
World Water Day 2013 & Myanmar - MoeMaKa - Maung Kyay Yay
October 28th 2010 – MoeMaKa Daily Newsletter
Cartoon Zaw DD - Welcome to 2010 Election #2ဂီရိသင့်ဒုက္ခသည်များကို အရောက်ကူညီရန်WAO ရခုိုင်အမျိုးသားအသင်း ကြိုးပမ်းမည် မြန်မာပြည်၏ အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ကလုန်း ဂီရိသင့်ဒုက္ခသည်များ ကူညီရန်နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာများက ပြင်ဆင် အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၃၀ မှ စတင်ပြီး စစ်အစိုးရရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြရန်အမေရိကန်မြန်မာတို့ နှိုးဆော် ဂီရိဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်သေဆုံးပျက်စီးမှုကို အစိုးရထုတ်ပြန်ကြေညာ ဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ ရတနာပုံပေါ်တယ်က ဂူးဂဲကို ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီလား စင်ပြိုင်အစိုးရ အလံကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ ခိုးယူ Burmese in Singapore say No to Regime's SHAM Election
စက င်္ာပူက မြန်မာများကလည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အလိုမရှိ သီးညီနောင်နဲ့ မျိုးဆက်သစ်လှပျိုဖြူတို့က ၂၀၁၀ ကို စိန်ခေါ် နာရေးကူညီမှုအသင်း ( ရန်ကုန်) ၏ သတင်းမှတ်စု လှုပ်ရှားမှုများ
Cartoon Zaw DD - Welcome to 2010 Election # 2
ဂီရိသင့် ဒုက္ခသည်များကို အရောက်ကူညီရန် WAO ရခုိုင်အမျိုးသားအသင်း ကြိုးပမ်းမည်
နိုဝင်ဘာ ၇ တွင်ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာတွင်ရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲ စီစဉ်
မိုးမခအထောက်တော်၀၀ ၂ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀
လူပေါင်း ၇ သောင်းကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ပြီး၊ လူပေါင်း ၁ သိန်း ၃ သောင်းကျော်ကို ထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ ကုလအစီရင်ခံစာတွေထဲမှာ ဆိုတဲ့ ဂီရိမုန်တုိုင်းဒဏ်သင့်ဒေသတွေမှာ အများပြည်သူတွေရဲ့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အကူအညီတွေ လိုအ ပ်နေတယ်လို့ နိုင်ငံတကာရခိုင်အမျိူးသားအသင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အဲသည်လို လိုအပ်ချိန်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ဆီကို အရောက် အမြန်ဆုံး ကူညီနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ World Arakan Organization နိုင်ငံတကာရခုိုင်အမျိူးသားအသင်းက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၂၂၊ ၂၃ မှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဂီရိမုန်တိုင်းဒဏ်က သက်သာစေဖို့ ကြိုတင်အရေးယူမှုတွေပေါ့ဆတယ်၊ မုန်တုိုင်းသင့်ပြီးချိန်မှာလည်း ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတွေ ပြတ်တောက်နေတာကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေက မမြန်ဆန်ခဲ့ဘူး။ ယခု ၅ ရက်အကြာမှာ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ မုန်တုိုင်းသင့်ဒေသ ကူညီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ကြန့်ကြာမှုတွေရှိနေတုန်းပဲလို့ မြန်မာပြည်တွင်းက မျက်မြင်အချို့က စစ်အစုိုးရကို ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ကူညီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်က လိုက်လာဖို့လိုတဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကိုလည်း ဒုက္ခသင့်ပြည်သူတွေက ၂၀၀၈ နာဂစ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဂုဏ်သိက္ခာ လုံးဝပျက်ထားတဲ့ စစ်အစုိုးရဆီက မျှော်လင့်ချက်အများကြီး မထားပါဘူးလို့ ရန်ကုန်က စေတနာဝန်ထမ်းတချို့က ဝေဖန်စကား ပြောလိုက်ပါတယ်။ Arakan Review (http://arakanreview.net ) ၀က်ဆိုက်မှာ တင်ထားတဲ့သတင်းအရ ကျောက်ဖြူမြို့ရှိ
ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့ အချို့ကျောင်းဝင်းတွေမှာ ခိုလှုံနေထိုင်ကြတဲ့ လေဘေးသင့်ဒုက္ခသည်တွေကို စစ်အာဏာပိုင်တွေက အထက ၁ ကျောင်းဝင်းထဲကို ရွှေ့ပြောင်းထားပြီး ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်တွေစီမံနေချိန်ဖြစ်လို့ ပြင်ပနဲ့ အဆက်ဖြတ်ထားတယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ အဲသည်ရဲ့ သတင်းရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကတော့ စစ်တပ်က ဂီရိမုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေ သတင်းကို မှောင်ချရန်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကူညီမှုတွေကို ဖြတ်တောက် ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားတာပဲဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းသင့်နယ်မြေသတင်းနဲ့ စစ်အစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း
ကွဲလွဲတယ်လို့လဲ ရခုိုင်သတင်းဌာနတခုဖြစ်တဲ့ နေရဉ္စရာ မှာလည်း သတင်းပို့ထားပါတယ်။
အမေရိကန်ရောက် WAO ရခုိုင်အမျိုးသားအသင်းက တာဝန်ခံတဦး ဖြစ်သူ ဦးစိန်ထွန်းက မိုးမခကို ပြောကြားရာမှာ အမေရိကန်ရှိ ပြည်နယ်အသီးသီးက အသင်းဝင်များကို အခြေခံပြီးတော့ အလှူခံကိုယ်စားလှယ်များ သတ်မှတ်ပြီး သတင်းပြန်ကြားခြင်း၊ နှိုးဆော်ခြင်း၊ အလှူခံခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်း၊ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေများ၊ အသင်းအဖွဲ့များကို အခြေခံပြီးတော့ ကူညီမှုများကို မြန်မြန်နဲ့ ထိရောက်အောင် ပို့ဆောင်သွားမယ် ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ ဘယ်လိုအတားအဆီးရှိရှိ မရောက်ရောက်အောင်လှူမယ်လို့ သံန္နိဌာန်ချထားကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိအလှူငွေများ လက်ခံ လှူဒါန်းမှုတွေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြင်လာမယ့်နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်မှာ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာမိသားစုများနဲ့ လက်တွဲပြီးတော့ ဂီရိသင့်သူများ ကူညီရေး ရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲတခု ကျင်းပဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ ရပ်ဝေးက စေတနာရှင်များအနေနဲ့ အလှူငွေ နည်းများမဆိုကို စာတိုက်ကနေ ချက်လက်မှတ်မှာ WAO သို့ ရေးပြီး 1952, McNair St, Palo Alto, CA 94303 ကို ပေးပို့နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ WAO ရဲ့ တရားဝင်ဝက်ဆိုက်ကတော့ - http://www.worldarakan.org/ ဖြစ်ပါတယ်။ WAO
အသင်းဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး ရခုိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေး စေတနာဝန်ထမ်း အလှူဒါနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အသင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်မိုးတွင်းကာလတုန်းက ရခုိုင်ရေဘေးသင့်သူတွေကိုလည်း တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီခဲ့တဲ့ အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ( သည်နေရာမှာ သူတို့သတင်း ရှိပါတယ်-)
“ပြည်နယ်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နယ်မြေတွေမှာ အကူအညီတွေအများကြီး လုိုအပ်နေတယ်။ ဒါကို တိုင်းရင်းသားတွေက ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စေတနာဝန်ထမ်း စုဆောင်းပြီး ကူညီကြ၊ လှူဒါန်းကြတာတွေလုပ်ကြပါတယ်။ နီးစပ်ရာ သိကြတဲ့ မိသားစုတွေကလည်း ၀ိုင်းကြတာပေါ့။ တဖက်ကလည်း စစ်အာဏာပိုင်တွေ၊ စစ်တပ်လက်နက်ကိုင်တွေက အဲသည်လို ဒေသတွေမှာ ရန်ငြိူးထားပြီးတော့ အနှောက်အယှက်ပေးမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ကြရတယ်။ မသိလုို့ မကူနိုင်ဘူး၊ သိအောင်လုပ်တော့လည်း စစ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလည်း ကြောက်ရ။ ဘေးကြပ်နံကြပ်ဖြစ်ရတယ်။ ” လို့ မိုးမခမိတ်ဆွေ တိုင်းရင်းသားတဦးက သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းက လူမှုရေးစွမ်းဆောင်မှုတွေ၊ စွမ်းဆောင်သူတွေကို ဂုဏ်ပြုမှုတွေ၊ စာရင်းပြုစု သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေအဓိကထားပြုလုပ်တဲ့ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာတွေ စုစည်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် (Citizen of Burma http://citizenofBurma.org ) အသင်းက မြို့နယ်အသီးသီးရှိ
လုပ်အားပေးတွေမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ ယခုလက်ရှိ အလှူခံလုပ်ငန်းတွေ၊ ရန်ပုံငွေပွဲတွေဆောင်ရွက်နေသော World Arakan Organization (WAO) ရခုိုင်အမျိုးသားအသင်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီအားပေးကြရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ၊ ဖရီးမောင့်ပန်းခြံ၊ နိုဝင်ဘာ ၇ မှာ ကျင်းပမဲ့ ဂီရိဒဏ် ကူညီရေး ရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲဖိတ်စာကို သည်နေရာမှာ ရယူပါ။ ရခိုင်အမျိုးသားအသင်းရဲ့ ပြည်နယ်အသီးသီးက အလှူခံကုိုယ်စားလှယ်များက သည်မှာပါ -
ရှေ့ဖြစ်ဟောတတ်တဲ့ မြန်မာပြည်က ဘ၀ဲကြီး ကာတွန်း ဘီရုမာ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀
ဗေဒင်ဆရာ ရေဘ၀ဲ လူကြီးရောဂါဖြင့် ဓာတ်ပုံသတင်း အောက်တိုဘာ ၂၈၊
ကွယ်လွန်
ယခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကျင်းပစဉ်မည်သည့်အသင်းအနိုင်ရမည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသော ရေဘ၀ဲ အင်္ဂါနေ့က သေဆုံးသွားကြောင်း သူနေထိုင်ခဲ့သည့်ငါးပြတိုက်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက သတင်းဌာနများကိုပြောသည်။ ရေဘ၀ဲ ပေါလ်ကွယ်လွန်ချိန်တွင်အသက်၂ နှစ်ခွဲခန့် ရှိပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကျော်ပေါလ်ကိုသူနေထိုင်ခဲ့သော ဂျာမဏီရှိ ပြတိုက်တွင်မြှုပ်နှံမည်ဟု ဆိုသည်။ ပေါလ်ကဲ့သို့သော ရေဘ၀ဲ အမျိုးအစား တကောင်အများဆုံး အသက်ရှင်နိုင်သည့်ကာလမှာ ၃ နှစ်ခန့် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် အောင်ဝေး အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀
[ ကဗျာ အပိုင်း - ၃]
မိတ်ဆေ-ွ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် မန္တလေးတောင်ပေါ် တက်မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ဒီပဲယင်းမှာ နှင်းမိုးရွာမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် မြန်မာ့ရုပ်သံက ဟဒယရွှင်ဆေး လာမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင်
မြ၀တီရုပ်သံက ဟာသကား ပြမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ကြေးမုံသတင်းစာ မီးလောင်မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ရေကြီးမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျ ရင် ငရဲပြည်မှာ လုံခြုံရေး တင်းကျပ်မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် နေပြည်တော်မှာ ငလျင်တော်လည်းမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ကိုဇာဂနာကြီးဆီထောင်ဝင်စာပို့ မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောစာတမ်း ဖတ်ရမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ထီးရိုးကို မိုးကြိုးပစ်မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ခြင်္သေ့ကို မြားနဲ့ ခွင်းမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ကျော်သူနဲ့ နာရေးသွားကူမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ရွှေဂုံတိုင်မှာ စောင့်မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် အိမ်က သပြေပင်ကလေး ရေလောင်းမယ်။
စက င်္ာပူရောက် လူငယ် ဉာဏ်ကြီးရှင် မြန်မာပန်ဂရ မ် တီထွင် မိုးမခအထောက်တော်အမှတ်၀၀၈ အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၀
က’ မှ ‘ အ ’ အထိအက္ခရာစုံ ပါဝင်သော ၀ါကျတိုကိုပထမဆုံး ဖန်တီးသူ ကိုမောင်မောင်ဆန်း (photo:
လူငယ်တဦးက မြန်မာအက္ခရာ ၃၃ ခု စလုံး ပါဝင်သည့်ဝါကျတိုတခုကိုတီထွင်လိုက်ကြောင်း တနင်္လာနေ့ထုတ်
တီထွင်သူမှာ စင်္ကာပူတွင် ရောက်ရှိနေသော ကိုမောင်မောင်ဆန်း ဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာလက myanmaritpro.com တွင်ဖိတ်ခေါ်ထားသော အက္ခရာ အားလုံး ပါဝင်သည့်ဝါကျတိုပြိုင်ပွဲ ကြော်ငြာကိုတွေ့ပြီး ၀ါကျတိုများ တီထွင်ခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ဆုံးတွင် “ သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝဍ္ဎနဆေးညွှန်းစာကို ဇလွန်ဈေးဘေး ဗာဒံပင်ထက် အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏ ဖတ်ခဲ့သည်” ဟူသော ၀ါကျကို ရေးသား၊
ကွန်ပျူတာ၊ လက်နှိပ်စက် စာစီစာရိုက် လေ့ကျင့်ခြင်း၊ စာလုံးပုံစံ (font) စမ်းသပ်ခြင်းတို့တွင် အလွန် အသုံးဝင်သော ထိုဝါကျမျိုး ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် pangram ( ပန်ဂရမ်) ဟု ခေါ်သည်။
The quick brown fox jumps over the lazy dog သည် အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ ၂၆ ခုစလုံး ပါဝင်သော
ရာစုတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
လုံးစီ ပါဝင်နေသဖြင့် ထို ပန်ဂရမ်မှာလည်း လုံးဝ ပြည့်စုံခြင်း မရှိပေ။
ထိုကြောင့် ၀ါကျတိုသော၊ ဟဒယရွှင်သော၊ “ခွေးငပျင်းပေါ် ခပ်လျင်လျင် မြေခွေးငညို ခုန်ကျော်သည်” ဟူသော
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pangrams ၀ီကီ ၀က်ဆိုက်တွင် နိုင်ငံစုံမှ ပန်ဂရမ်များကို တွေ့နိုင်သည်။ မြန်မာယူနီကုဒ် အခက်အခဲကြောင့် ၀ီကီတွင် မြန်မာပန်ဂရမ်ကို မထည့်သွင်းနိုင်သေးပေ။
မြန်မာဘာသာဖြင့် ပန်ဂရန် ဖန်တီးမှုမှာ အ ဂ င်္လိပ် ဘာသာထက် အခက်အခဲများ ပိုတွေ့ရသည်။ မြန်မာစာတွင် အက္ခရာများအပြင် လုံးကြီးတင်၊ သေးသေးတင်၊ ၀စ္စနှစ်လုံးပေါက်၊ ယပင့်၊ ရရစ်၊ ၀ဆွဲ၊ ဟထိုး၊ အသတ်
၁။ ဗိုလ်ဆံတောက်နဲ့ ဂဠုန်ဟာ အာယုဝဍ္ဎနဋီကာကို သဘောပေါက်စေဖို့ ဌာနေဇနပုဒ်က ဓနိတောထဲ
ဈာန်ဝင်စားခဲ့ရမည်။ ၂။ ဂဠုန်ဟာ အာယုဝဍ္ဎနဋီကာကို ဂဃနဏ သဘောပေါက်စေဖို့ ဌာနေဇနပုဒ် ဓနိတောထဲမှာ ဈာန်ဝင်စားရင်း
၃။ ဂဠုန်ဆရာစံဟာ အာယုဝဍ္ဎနဋီကာကို ဇလွန်ဈေးဘေး ဗာဒံပင်ထက်မှာ အဓိဋ္ဌာန်၍ ဂဃနဏ ဖတ်ခဲ့သည်။ ၄။ ဂဠုန်ဟာ ထီပေါက်စဉ်ကိုအာယုဝဍ္ဎန ဆေးညွှန်းမှတ်ပြီး ဇလွန်ဈေးဘေး ဗာဒံပင်ထက်အဓိဋ္ဌာန်ရင်း ဂဃနဏ ဖတ်ခဲ့သည်။
၅။ သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝ ဍ္ဎနဆေးညွှန်းစာကို ဇလွန်ဈေးဘေး ဗာဒံပင်ထက် အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏ ဖတ်ခဲ့သည်။
Cartoon Zaw DD - Welcome to 2010 Election October 27th, 2010
နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် အောင်ဝေး အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၀
[ ကဗျာ အပိုင်း - ၂]
မိတ်ဆေ-ွ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ၀ါရှင်တန်- ဒီစီမှာ လူစုကြမယ်။နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ဘန်ကောက်ကို ချီတက်ကြမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ရေဒီယိုကနေ ဥသြဆွဲမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ဝေနှင်းပွင့်သုန်ဆီကို အီးမေးလ်ပို့ မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် မဒမ်လျူရှောက်ဘိုကို အားပေးစကားပြောမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် နယူးယောက်မြို့ သတင်း လှမ်းမေးမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် မဲခေါင်မြစ်ထဲမှာပန်းခွေမျှောမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ဖုန်းမော်ဝိညာဉ်ကိုယ်ထင်ပြမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် မိသားစုနဲ့ ဂန္ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် မောင်ချောနွယ်နဲ့အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ဆရာဦးတင်မိုးနဲ့ဂျီတော့ခ်ပြောမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ချီကာဂိုထရီဗြွန်းမှာကြော်ငြာ ထည့်မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ယူတူး - အယ်လ်ဘမ်နားထောင်မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် အင်းစိန်ထောင်မှာ အရိုးတွန်မယ်။
မြန်မာပြည်၏ အတုအယော င် ရွေးကောက်ပွဲ
ဂါဒီးယန်သတင်းစာ၊ အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၀ ( ဇာဝါရီ ( မယ်ရီလန်) ပြန်ဆိုသည်)
ဝေနှင်းပွင့်သုန်ရဲ့
international ) ကို ဇာဝါရီ( မယ်ရီလန်) က ဆီလျှော်အောင်ပြန်ဆိုထားပါတယ်။
မေလထဲမှာ ကျမအနေနဲ့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခုကို တွေ့မြင်ခံစားခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက ကျမရဲ့  မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်နဲ့ မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့  မေလ ရွေးကောက်ပွဲကို ဒုက္ခသည်တဦးအနေနဲ့ တွေ့မြင်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လမှာဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပတော့မယ်။ ကမ္ဘာကြီးလည်း မြန်မာပြည်ကို ခဏတဖြုတ်တော့ ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကတော့ လွတ်လပ်မှုလည်းမရှိ တရားမျှတမှုလည်း မရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခြင်းက တကယ်တော့ နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုကိုနှစ်သက်ဖြေသိပ်တဲ့ လှည့်စားမှုတခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိမယ့်သူများကတော့ လက်ရှိ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစား၊ ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်နေသော အုပ်ချုပ်သူများဖြစ်ပြီး အာဏာရှင်စနစ်ဆက်လက်တည်ရှိသွားလိမ့်မည်။ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲက မှုန်ဝါးဝါးမျှော်လင့်ချက်အလင်းရောင်လေး ပေးရုံမျှသာ ဖြစ်တယ်။ အမြင်သဏ္ဍာန်အားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်တွေ အကြောက်တရားကင်းမဲ့၊ လူထုရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ဥပက္ခာပြုပြီး သူတို့လုပ်ချင်ရလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက် ရှိနေသလို ထင်ရပေမယ့် ကျမကတော့ သူတို့တတွေ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ နေကြတယ်လို့ ထင်မြင်ယုံကြည်နေတယ်။ မြန်မာပြည်က လွတ်လပ်စွာ အစည်းအရုံးဖွဲ့ခွင့်၊ စုရုံးခွင့် နဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်များကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ကလေးအလုပ်သမား နဲ့ မတရား ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်းခြင်း တို့ကို
တွေ့မြင်နိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ဖြ စ်တယ်။ ဒီလိုလူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို ကျမအနေနဲ့ ဝမ်းနည်းစွာ ကိုယ်တွေ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ကျမဖေဖေမှာ ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျောင်းသားထုကြီးကို သူ နဲ့ သူအပေါင်းအပါး အရေးတော်ပုံသမားများ ဦးဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမများပေါ် ချီတက်ပြီး သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူလူထုကြီးကို စည်းရုံးလှုံဆော်ကာ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ အာဏာရှင်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်။ ( အာဏာရှင် အစိုးရက) လူထုဆန္ဒပြပွဲများကို ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်ဖြိုခွင်းပြီး ကျမဖေဖေ အပါအဝင် စည်းရုံးလှုံဆော် ဦးဆောင်သူများကို ရိုက်နှက်၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်၊ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့တယ်။ ကျမအသက် ရှစ်နှစ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ကျမဖေဖေ အကျဉ်းစခန်းမှ ပြန်လွှတ်မြောက်လာခဲ့တယ်။ ကျမအနေနဲ့ ကျမဖေဖေကို လွတ်လပ်သူတဦးအနေနဲ့ ပြန်တွေ့ရတာကို အလွန်ဝမ်းသာခဲ့ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလမှာ ဖေဖေမရှိဘဲနေခဲ့ရတာဖြစ်လို့ အစမှာ ရှက်ကြောက်နေပေမယ့် နောက်ပိုင်း ဖေဖေကို ကျမ စိတ်တိုင်းကျ အချိန်မရွေး ဖက်တွယ်ကစား၊ စကားပြောရတာကို ဝမ်းသာကျေနပ်နေမိခဲ့တယ်။ ကျမတို့နဲ့အတူ ဖေဖေ ရှိနေခဲ့ပေမယ့် ကျမ ဖေဖေအတွက် အမြဲတမ်း စိုးရိမ်ပူပန်နေမိခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖေဖေ ဆက်လုပ်ကိုင်နေခဲ့တယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ကျမအနေနဲ့ ဒါကို အလွန်လေးစားဂုဏ်ယူနေမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီကာလမှာတော့ ညကြီးမိုးချုပ်သန်းခေါင်ချိန်မှာ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ ကျမတို့အိမ်ကို ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး ဖေဖေ ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားမလားဆိုတာကို ကျမအနေနဲ့ အမြဲတမ်း စိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်ရွံ့ နေခဲ့တယ်။ ကျမဖေဖေ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို ပညာသင်ဖို့ ကျမရောက်ရှိခဲ့တယ်။ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ကို ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာများမှတဆင့် ကြည့်ရှု့ ခဲ့ရတယ်။ လူထုကြီး ရန်ကုန်လမ်းများပေါ်မှာ ချီတက်ဆန္ဒပြတာကို ကြည့်ပြီး ဒီတကြိမ်တော့ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်လို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရက ဆန္ဒပြပွဲများကို တခါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ချေမှုန်းလိုက်ပြန်တယ်။ ကျမဖေဖေ ကိုတော့ ဒီတကြိမ်သေဒဏ်ချလိုက်သလို ၆၅ နှစ်စီရင်ချက်ချပြီး ထောင်ချလိုက်ပြန်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လတွေအတွင်းမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့  နိုင်ငံရေးပါတီကြီး ( ၃ ) ပါတီ နဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တို့ရဲ့  အစည်းအဝေး ကွန့်ဖရန်များကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေ နဲ့ နိုင်ငံတကာ ကွန်မြူနတီအနေနဲ့ အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ဖိနှိပ်ချုပ်နှောင်းခံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကို ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။ ကျမဖေဖေလို့ပါပဲကျမအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေများကို ကမ္ဘာက သိအောင် တင်ပြပြောဆိုဖို့ ကျမမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ လက်ခံယုံကြည်ထားပါတယ်။ စစ်အစိုးရအပေါ် ပြည်ပကနေ ဖိအားပေးလုပ်ဆောင်ပြီး နှစ်ဘက် ( ပြည်တွင်း) အင်အားစု ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းက ပိုမိုထိရောက်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ တချို့ အမြင်မှာ နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေး တောင်းဆိုချက်တွေဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဖို့၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ကန့်သတ်မချုပ်ချယ်ဖို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၁၀၀ ကျော်ကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တွေကို စစ်အစိုးရက မသိကျိုးကျွန်ပြုနေနိုင်တယ်လို့ ဝေဖန်ပြောဆိုကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမအနေနဲ့ကတော့ ဒီလာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲက နိုင်ငံတ ကာရဲ့  ပြင်းထန်တဲ့ ဖိအားပေးမှုကြောင့်စစ်အစိုးရ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ပြီး လုပ်တာဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ စစ်အစိုးရ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းပြမြေပုံ ( ၇ ) ဆင့်ရဲ့  အဆင့်တဆင့်ဆိုတာကို ကမ္ဘာက မေ့နေခဲ့ကြတယ်။ ဒီလို ကြေညာလုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်း စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ ကျိုးပမ်းခဲ့တာကို ကမ္ဘာက ဒေါသထွက် ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ စစ်အစိုးရကို စီးပွားပိတ်စို့ အရေးယူလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အာဏာရှင်စစ်ဗိုလ်တွေက ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဂတိစကားနဲ့ နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေးမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေတယ်။ အခုတော့ သူတို့မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်နေတယ်။
နိုင်ငံတကာက ကျမတိုိ့ကို စောင့်ကြည့်ဖို့ ပြောဆိုခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိလာခဲ့ပေမယ့် ဘာမှ ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ ကျမတို့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားေ တွသာ ပိုပြီးဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခံစားနေရတယ်။ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသွားရင်တော့ ကျမတို့အနေနဲ့ ဆင်ခြေဆင်လက်တွေ၊ စောင့်ကြည့်ပါအုံး ဆိုတာတွေကို လက်မခံနိုင်တော့ဘူး။ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲက ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို ဦးတည်သွားနေပါတယ်ဆိုပြီး ဆက်လက် ပြည်သူများကို နှိပ်စက်လုပ်ကိုင်သွားမယ့် စစ်အစိုးရရဲ့  လိမ်ညာမှုကို လက်မခံနိုင်ပါ။ ဒီအတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲက ကျမကို အထူး ထိတ်လန့်စေပါတယ်။
ဆိုင်ကလုန်း ဂီရိသင့် ဒုက္ခသည်များ ကူညီရန် နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာများက ပြင်ဆင်
မိုးမခအထောက်တော်၀၀၃ အောက်တိ်ုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၀
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်၊ အောက်တိ်ုဘာ ၂၂၊ ၂၃ မှာ မြန်မာပြည်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသကို ဆိုင်ကလုန်းဂီရိ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာ မြေပုံ၊ မင်းပြားနဲ့ ကျောက်ဖြူဒေသတွေမှာ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုများ၊ လူသေပျောက်မှု၊ ပျောက်ဆုံးမှုများနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ အဲသည်အတွက် ပြည်ပရောက် မြန်မာမိသားစုများ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေက စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုများ၊ ကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေများ စတင်ကောက်ခံပြီး လှူဒါန်းခြင်း၊ ဖြန့်ချိပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာရခိုင်အမျိူးသားအ သင်း ( အမေရိကန်) က အရေးပေါ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အရေးပေါ်ကူညီမှုရန်ပုံငွေများ ကောက်ခံကြရန်၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိအဆင်သင့်ရှိတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆၅၀ .၀၀ ကို ရန်ကုန်အခြေစိုက် ရခိုင်သဟာရအသင်းကြီးထံ ဂီရိသင့် ဒုက္ခသည်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် အောက်တိုဘာ ၂၄ နေ့စွဲနဲ့ လွှဲအပ်လိုက်ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဂီရိလေဘေးသင့်ဒုက္ခသည်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အလှူငွေ ကောက်ခံရန်အတွက် နီးစပ်ရာ မြန်မာများ၊ အမေရိကန်ပြည်သူများထံမှ လိုက်လံကောက်ခံခြင်း၊ စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် မြန်မာပြည်သို့ အမြန်ဆုံး လိုအပ်သည့် နေရာဒေသနှင့် ဌာနများသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းတို့ကို နိုင်ငံတကာရခိုင်အမျိူးသားအသင်းက တာဝန်ခံများသတ်မှတ်ပြီး စတင်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ရခိုင်သဟာယအသင်းကြီးနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်း လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတ ယ်။ အခြား ဒေသခံများ၊ အသင်းအဖွဲ့များနဲ့လည်း ဆက်သွယ်ပြီး ကူညီပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသင်းရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ ကြေညာချက်ကို သည်နေရာမှာ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာနဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာအမျိုးသားများနဲ့ ရခိုင်အသင်း ( စင်္ကာပူ) ကလည်း Cyclone
GIRI Relief Fund ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရခိုင်ကျောင်းသား ရဟန်းတော်များအဖွဲ့ကလည်း ရခိုင်ပြည် ဂီရိမုန်တိုင်း လေဘေးဒုက္ခသည်များ ကူညီထောက်ပံ့ရေးကော်မီတီကို ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
လက်ရှိ အင်တာနက်စာမျက်နှာများအနက် ဂီရိမုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို အာရကန်ဗျူး စာမျက်နှာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ http://arakanreview.net
အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၃၀ မှစတင်ပြီး စစ်အစိုးရရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြရန် အမေရိကန်မြန်မာတို့ နှိုးဆော်
မိုးမခအထောက်တော်၀၀၂ အောက်တိ်ုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀
လာမည့် ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲသည် ဒီမိုကရေစီနည်းမကျခြင်း၊ အာဏာရှင်စနစ်ကို အတည်ပြုမည့် အခြေခံဥပဒေကို အသက်သွင်းခြင်းတို့ကြောင့် အသိအမှတ်မပြုကြောင်း၊ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသကြရန် အမေရိကန်ရှိ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူ မြန်မာကွန်မြူနီတီများနှင့် အစုအဖွဲ့အသီးသီးက တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လိုက်သည့် ထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ရှိလာသည်။ မြန်မာပြည်၏ အတိုက်အခံပါတီနှင့် ခေါင်းဆောင်များက သပိတ်မှောက်ထားသော စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အမေရိကန်ြ ပည်ထောင်စုရှိ ၁၄ မြို့နယ်က မြန်မာမိသားစုများကလည်းလက်မခံကြောင်း၊ ရလဒ်များကို အသိအမှတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ အောက်တိ်ုဘာ ၂၀ က ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက်၊ ယမန်နေ့က ထိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ “ပြည်တွင်းမှ ဖိနှိပ်ခံ မြန်မာပြည်သူများ၏ ရင်တွင်းဆန္ဒမှန်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း မရသည့် အနေအထားတွင်၎င်းတို့ကိုယ်စား နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းရှေ့တွင်ပြည်သူ့ဆန္ဒမှန်များကို ဖော်ထုတ်ပေးကြရန် တာဝန်ရှိသည်” ဟု ပြည်ပနေ မြန်မာပြည်သူများအား တိုက်တွန်းထားသည်။ နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာဒီမိုကရေစီရေး လိုလားသူ မြန်မာမိသားစုအသီးသီးက ၎င်းတို့ရောက်ရှိရာ နိုင်ငံအသီးသီး၏ မြန်မာစစ်သံရုံးများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဆောက်အအုံများ၊ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ အထူးမဟာမိတ်နိုင်ငံတို့၏ သံရုံးများရှေ့တွင် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပွဲများ ကျင်းပပြီး မြန်မာပြည်သူတို့၏ အသံကို ကမ္ဘာက ကြားအောင်လုပ်ကြဖို့ ဆောင်ရွက်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် မြန်မာ့အရေးကို ဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရလိုလားသူ နိုင်ငံများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များက စင်မြင့်ပေါ်တက်ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများ၊ အာဏာရှင်အလိုကျ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မြောက်စေရေးတို့အတွက်
စစ်အစိုးရကို ကာကွယ်ြုခင်း၊ ထောက်ခံခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြချိန်မှာ ပြည်ပရောက် မြန်မာတို့ကလည်း မိမိတို့ နေရာဌာနများကနေပြီး ပြည်သူ့သဘောထားကို ပြသကြရမည်ဖြစ်သည်ဟု ဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်မည့် မြန်မာတဦးက မိုးမခကို ပြောကြားသည်။ အမေရိကန်ရှိ မြန်မာကွန်မြူနီတီများအနက် အရှေ့ဖက်ခြမ်းရှိ နယူးယောက်နှင့် ၀ါရှင်တန်တို့တွင် အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၃၀ တို့တွင် မြန်မာသံရုံးနှင့် ယူအင်န်ပလာဇာတို့ရှေ့တွင် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ကြမည် ဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန်အနောက်ခြမ်း ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်၊ အောက်တိ်ုဘာ ၃၀၊ ယူအင်န်ပလာဇာရှေ့တွင်စုဝေးကြမည်ဟု ဖ်ိတ်ခေါ်ထားသည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ အထူးမဟာမိတ်ဖြစ်သော စက င်္ာပူနိုင်ငံနေ မြန်မာများ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားများကလည်း အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့တွင် စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကန့်ကွက်သော ဆန္ဒပြပွဲကို အစိုးရခွင့်ပြုထားသော ပန်းခြံ၏ Speaker Corner တွင်ကျင်းပ မည်ဟု ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ ထုတ်ပြန်ချက်များကို သည်နေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါပြီ။ အမေရိကန်မြန်မာကွန်မြူနီတီတို့၏ စုဝေးကြေငြာချက်၊
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာကွန်မြူနီတီ၏ ဖိတ်ကြားလွှာ ။
မိုးမခ အထောက်တော်၊ ရန်ကုန် အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀
အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၃ ရက်နေ့များမှာ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့ အားအလွန်ကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးရတဲ့ အရေအတွက်နဲ့ ပျက်စီးမှု စာရင်းတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရ ရုပ်သံနဲ့ ယနေ့ထုတ်အစိုးရသတင်းစာများမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဘဂ င်္လားပင်လယ်အော်မှာ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၂ ရက်အကြာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက်ကမ်းရိုးတန်း ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ကုန်မှာ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဆိုက်ကလုန်း မုန်တိုင်း ဂီရိကြောင့် လူ၂၇ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၅ ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရပိုင်ရုပ်သံနဲ့ သတင်းစာများမှာ ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အသေအပျောက် အများဆုံးက မြေပုံမြို့မှာ ဖြစ်ပြီး ၂၂ဦးသေဆုံးကာ ၁၅ ဦးပျောက်နေတာလို့ ကြေညာချက်မှာပါပြီး မင်းပြားမြို့မှာတော့ ၅ ဦးသေဆုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပျက်စီးမှုအနေနဲ့ကတော့ မြေပုံမြို့မှာ အိမ်ခြေ ၂ထောင်ကျော်၊ မင်းပြားမှာ အိမ်ခြေ ၆ ရာနီးပါးနဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့မှာတော့ အိမ်ခြေ ၁ ထောင်ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ ပါရှိပါတယ်။ လူနေအိမ်များ ပျက်စီးတဲ့အပြင် အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာ ရုံးများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများပါဝင်တဲ့ အပြင် စက်လှေ အစင်း ၈၀ ပျက်စီးခဲ့ပြီး တံတားအချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ယခုမုန်တိုင်းဟာ ၂၀၀၈ ခု မေလမှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ် နောက်ပိုင်း အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ ပျက်စီးမှု အများဆုံး ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ မုန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေဟာ မကြာမီ ရက်ပိုင်းကတည်းက ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေပြီး ယမန်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်း ဒေးဒရဲနဲ့ ဘိုကလေးမြို့နယ်များသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုနေပေမယ့် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဆီသွားရောက်တာတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် အောင်ဝေး အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀
[ ကဗျာ အပိုင်း - ၁]
နိုဝ င်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ကမ္ဘာပျက်မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် သံပုံးတီးမယ်၊တောထုတ်မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင်
ခွပ်ဒေါင်းအလံလွှင့်မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ရွှေတိဂုံမှာအောင်မြေနင်းမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ စကာြးေ ပာမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘက်လှည့်ကြည့်မယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် အင်ဒီယားနား- ဖို့ တ်ဝိန်းမှာဆန္ဒပြမယ်။ နိုဝင်ဘာ ( ၇ ) ရက်နေ့ ကျရင် ဆရာကြီးမှိုင်းအုတ်ဂူသွားကန်တော့မယ်။
ဂီရိ မုန်တိုင်း အသေအပျောက်စာရင်း သတင်းစာတွင် ထည့်ပြီ ဓာတ်ပုံသတင်း အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀
ဗိုလ်တထောင်ဆိပ်ကမ်းတွင်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသော ဒေသသို့ သွားမည့်ကူညီရေး ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်နေပုံ (photos:AP)
သောကြာနေ့က တိုက်ခတ်ခဲ့သော ဆိုင်ကလုန်း ဂီရိကြောင့်သေကျေပျက်စီးမှုအချက်အလက်များကို စစ်အစိုးရက တနင်္လာနေ့တွင်ကြေညာခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမြို့ ၂၂ ဦး သေဆုံး၊ ၁၅ ဦး ပျောက်ဆုံး
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့ ၅ ဦး သေဆုံး
မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်တို့မှ သင်္ဘော ၂ စီး ရခိုင်ဒေသတွင် မုန်တိုင်းမိ ဓာတ်ပုံသတင်း အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀
YUH FA No-9 နှင့်MV Phuchaingmon ဂီရိဆိုင်ကလုန်းဒဏ်ခံလိုက်ရသော မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်တို့မှ သဘေ င်္ာ ၂ စီးကိုမြန်မာ့ရေတပ်က ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်ဖြူမြို့အနီး သွားရောက်ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ခဲ့သည်ဟု ယနေ့ထုတ်သတင်းစာများတွင် ရေးထားသည်။
စနေနေ့ နံနက်က မုန်တိုင်းအန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သဘေ င်္ာ ၂ စီးထံမှ အချက်ပြ သတင်းပို့ချက်ကို မြန်မာ့ရေတပ်က ရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ သဘေ င်္ာသားများ ထိခိုက်မှုမရှိဟုလည်း ဆိုသည်။
YUH FA No-9၊ ကျူနာငါးမျှားတန်း ငါးဖမ်းရေယာဉ် မလေးရှားအခြေစိုက်၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဖက်စပ်ငါးဖမ်းနေသော MTO ကုမ္ပဏီပိုင် ကျောက်တန်းတွင်တင်ပြီး ခါးကျိုးနေ။ နိုင်ငံခြားသား ရေယာဉ်အမှုထမ်း ၁၁ ဦး ပါဝင်။
MV Phuchaingmon ဗီယက်နမ်ကုန်တင်သင်္ဘော ကျောက်တန်းတွင်တင်နေ။ အမှုထမ်း ၂၆ ဦး။
ပခုက္ကူ ရေနံမြေမှ ဒေသခံ ရာနှင့်ချီ မီးလောင်ခံရ၊ ၁၄ ဦး သေဆုံး ဓာတ်ပုံသတင်း အောက်တိုဘာ ၂၆၊
မီးလောင်နေသော နေရာကိုအဝေးမှ ရိုက်ကူးထားပုံ (photo: AP)
ပခုက္ကူမြို့နယ်အတွင်း ပေါက်နေသည့်ပိုက်လိုင်းမှ ယိုထွက်သည့်ရေနံကိုဒေသခံ ရွာသားများ သယ်ယူကြစဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၈ နာရီခန့်က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသောကြောင့်၁၂၁ ဦး မီးလောင်ဒဏ်ရာ ရခဲ့သည်ဟု ယနေ့ထုတ်သတင်းစာများတွင်ရေးထားသည်။ ဒဏ်ရာကြောင့်သေဆုံးသူ ၁၄ ဦး ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ရေနံ သယ်ယူသူ ဒေသခံများမှာ ညောင်လှ၊ ညောင်နီပင်၊ သိန်တော၊ အိုင်ကြီး ကျေးရွာတို့မှ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေနံပိုက် ပေါက်သည့်နေရာမှာ ညောင်လှကျေးရွာအနီး မြစ်ခြေ - ဆိတ်ဖြူ ကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ်၂၂ မိုင်၎ ဖာလုံ နေရာတွင်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သူရိန်ထက် အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀
အဲဒီနေ့က ကျနော်တို့ တံခါးပိတ် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး လုပ်ကြတယ်။ ကျနော်တို့ဆိုတာက
အင်ဂျင်နီယာတွေ ပါတယ်။ တာဝန်ခံကုမ္ပဏီက လူတွေလည်း ပါတယ်။ ဒေသခံ မြို့မိမြို့ဖတွေလည်း ပါတယ်။
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလူတွေပါ တယ်။ နောက်
လူစုံ ဆိုပါတော့ဗျာ။ အဲ
ပိုမှန်မယ်။ ခေါ်ထားလို့လည်း မဖြစ်သေးဘူးလေ။ ကျနော်တို့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေ အကုန်စုပေါင်း
တိုင်းမှူးနဲ့ လူကြီးတွေလည်း ပါတယ်။
မီဒီယာသမားတွေတော့ မပါဘူး။ မပါဘူး ဆိုတာထက် မခေါ်ထားသေးဘူးဆိုရင်
ဆွေးနွေးပြီး အထက်ကိုတင်ပြ။ အထက်က အိုကေဆိုမှ မီဒီယာက တဆင့် တင်ပြရမှာကိုး။
အစကပဲ ပြန်ရှင်းပြမယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ဆီက
သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ဟိုးလေးတကျော် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ ဖော်ပြနေတဲ့ “ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ နံနက်၉ နာရီမှာ နေပြည်တော်- မ န္တလေး လမ်းမသစ်ကြီး ဖွင့်ပွဲလုပ်တော့မယ်” ဆိုတဲ့သတင်းလေ။ ဟုတ်တယ်… သတင်းတွေမှာ စာလုံးမဲကြီးနဲ့ သတင်းဂျာနယ် အစုံစုံက ဖော်ပြနေတာလေ။
ဖြစ်ပျက်ပုံကို ခင်ဗျားတို့သိပြီးသား မဟုတ်လား။ ကဲပါလေ
ဖွင့်ပွဲကို ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက် ဘယ်အချိန် ဖွင့်ပါဆိုပြီး အထက်ကလည်း ညွှန်ကြားထားတော့ ကျနော်တို့ တာဝန်ရှိသူတွေလည်း ဝါယမစိုက်ပြီး အပတ်တကုတ် ကြိုးစားခဲ့တာပေါ့။ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ၊ တီဗွီတွေမှာ အဖွင့်သတင်းကြီးအနေနဲ့ အရေးပါတဲ့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင် ဖွင့်လှစ်ပေးမှာဆိုတော့လည်း ဘက်ပေါင်းစုံက
အဖြူအစိမ်းဝတ်တွေကိုလည်း ချောဆွဲရတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဆိုတာ ပုဝါစိမ်းတွေတြ ပင်ပြင်ပေါ့။ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေ၊ မုဒ်ဦးကြီးတွေ ကြိုလုပ်ထားရတယ်။ ဖဲကြိုးတွေ၊ မိုးပျံပူပေါင်းတွေကအစ အစုံစီစဉ်ထားတာလေ။ သတ်မှတ်ရက်အချိန်မှီ လမ်းမကြီးပြီးစီးအောင်လည်း နေ့ညမအား ကြိုးစားရတာပေါ့ဗျာ။ ဖဲကြိုးဖြတ်မယ့်လူကြီးဆို မှန်ရှေ့မှာ ကတ်ကြေးလေး တကိုင်ကိုင်နဲ့ စတိုင်ကျကျ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖို့အခါခါ စမ်းသပ်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထား ရရှာတာဆိုပဲ။ ကျောင်းသားလေးတွေလည်း အဲဒီနေ့ အကုန်လာဖို့ စီစဉ်ထားရတာ။ ကျုပ်တို့ ခြင်္သေ့ပါတီက လူတွေကလည်း အင်ပြည့်အားပြည့်ပေါ့ဗျာ။ ရပ်ကွက်တွေ မြို့တွေထဲက အနည်းဆုံး တအိမ်တယောက် မလာမနေရ။ စီစဉ်ထားပြီးသားလေ။
ဖြစ်ချင်တော့ ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်း လမ်းမကြီးက ဖွင့်တောင်မဖွင့်ရသေးဘူး။ ဖွင့်ပွဲလုပ်ဖို့ အစစ
ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်ဖြစ်ပြီဆိုမှ လမ်းမကြီးမှာ ဟိုနား ဒီနားက ပျက်ဟဲ့ ကျိုးဟဲ့ ပဲ့ဟဲ့ နဲ့ ဖြစ်ပါလေရော။ သွားပြီ။
တကယ်ဆို လမ်းမဖွင့်ပြီးမှ တံတားကျိုးကျိုး၊ ကားမှောက်မှောက်၊ လူသေသေ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပေါ့။ အခုတော့ မဟုတ်ပေါင်။ လမ်းဖွင့်တော့မယ်ဆိုမှ ကပ်ပြီး ကျိုးကြ ပျက်ဆီးသကိုးဗျ။ ခင်ဗျားတို့ပြောသလို ရှက်ဖွယ်လိလိ ဖြစ်တာပေါ့။ သူများနိုင်ငံတွေမှာဆို ရှက်လွန်းလို့ ရာထူးက နှုတ်ထွက်တာတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
ကျနော်တို့ကတော့ ရိုးနေပါပြီ။ ရှက်ကျိုးလည်း ဖြတ်ထားတာ
ကြာလှပေါ့။ အဲဒီလို တလွဲတချော်တွေ ဖြစ်တိုင်းသာ နှုတ်ထွက်ရရင် ကျနော်တို့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာ
ကျနော်တို့ကတော့ အရေထူနေတော့ ရှက်ပါဘူး။ ရှက်စရာကို
သတ်သေတာတွေတောင် ရှိကြမှာပေါ့။ အဲ
ဆိုတော့ ခုနပြောသလို အစည်းအဝေး လုပ်ကြတယ်။
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ ဘာကြောင့်လဲ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ ဘယ်သူတာဝန်ရှိသလဲ။ မီဒီယာကနေ ဘယ်လို
အင်ဂျင်နီယာတွေကလည်း သူတို့တာဝန်အတိုင်း အတိအကျလုပ်တယ်။ ဘိလပ်မြေ ရသလောက်နဲ့ ခိုင်အောင်ကောင်းအောင် ကွန်ကရစ်လမ်းကို ခင်းပါတယ်ပေါ့။ ကွန်ကရစ်ဆိုတာ ရေထိလေ ခိုင်လေဆိုလား ပြောကြတော့ အခုလို ရေတိုက်စားလို့ ပျက်စီးတာ သဘာဝလွန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ သူတို့က သူတို့ကို ခိုင်းတဲ့အတိုင်း စနစ်တကျလုပ်တယ်။ အခုဟာက ဆည်က ရေတိုက်စားလို့ ဖြစ်ရတာပေါ့။ အသေးစိတ်
လမ်းတာဝန်ခံကလည်း အောက်ခံမြေပျော့တယ်ဆိုပေမယ့် သာမန်ရေ တိုက်စားမှုဆို မပြိုလောက်ပါဘူးပေါ့လေ။ သူတို့အတွေ့အကြုံအရ ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ရှင်းပြပြန်တယ်။ နောက် အထက်က ချပေးတဲ့ငွေနဲ့
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာပါပေါ့။ အင်း
ဆောင်ရွက်ရတဲ့အကြောင်း၊ နေ့မအိပ် ညမအိပ် လုပ်သားခ ပိုပေးပြီးတောင် လုပ်ခဲ့ရတ့အကြောင်း။ဲ
သတ်မှတ်ရက်အမီ ပြီးစီးခဲ့ပါကြောင်း၊ ဘိလပ်မြေ
သဲ စတာတွေလည်း
ရှင်းပြပြန်တယ်။ သူတို့လည်း မိုးကြီးပြီး သတ်မှတ်ရေထက်ကျော်လွန်လို့ အထက်က ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း
ဖောက်ချရတာဖြစ်ကြောင်း၊ ဆည်ရေဖောက်ဖို့ လူထုကို အသိပေးပြီးမှ ဖောက်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ပေးထားတာမရှိလို့ ဖောက်ဖို့လိုမယ်ထင်တဲ့အချိန် ဖောက်ရကြောင်း၊ ဆည်က အရင်ကတည်းက
ရှိနှင့်ြ ပီးသားဖြစ်လို့ နောက်မှဖောက်မယ့် လမ်းသမားတွေက ရေဖောက်ရင် ဒီလို ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို
ဆည်မြောင်းက ရေတွေဖောက်ချတာကြောင့် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်လည်း ဆည်မြောင်းတာဝန်ခံက
ထည့်မတွက်ကြလို့သာဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့မှာ အပြစ်မရှိကြောင်း ထွက်ဆိုပြန်တယ်။ အင်း ဟုတ်တာပဲ။
ဒီတော့ အင်ဂျင်နီယာပိုင်း လူကြီးတချို့ကလည်း ပြန်ရှင်းပြန်ရော။ အထက်က လူကြီးက ရေစီးဆင်းနိုင်ဖို့ တံတားမထိုးပဲရေထွက်မြောင်းကြီး လုပ်ရင်ရတယ်ဆိုလို့ လုပ်ရကြောင်း။ တံတားထိုးခဲ့ရင် ရေစီးဆင်းဖို့နေရာ လုံလောက်လို့ အခုလို ကျိုးမှာမဟုတ်ကြောင်း၊ အနီးဝန်းကျင်မှာ ဆည်ကြီးရှိပြီး ဒီလို ရေစီးရင်
ဒီလိုပျက်ဆီးနိုင်တဲ့လို့ ဘယ်သူမှ သတိမပေးရဲခဲ့။ မပြောရဲ ခဲ့လို့ အခုလိုဖြစ်ရကြောင်း ပြောပြန်ရော။ ဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ။
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးလူကြီးတွေကလည်း ဒါ ဆောက်လုပ်သူ၊ စီမံကိန်းဆွဲသူ၊ ရေကာတာ၊ ဘာညာ အားလုံးမှာ ရာသီဥတုက ဖျက်လို့ဖြစ်ရကြောင်း ပြောပြန်တယ်။ ဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ။
အားလုံးက အပြစ်မရှိ။ တာဝန်မရှိ။ ဆင်ခြေတွေအပြည့်နဲ့ဆိုတော့ တိုင်းမှူးလည်း ဘာပြောရမှန်း မသိ ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လို အရေးယူရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတယ်။ အရေးယူဖို့ထက် ဘာကြောင့် ဘယ်လို ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကို အထက်ကလူတွေဆီ ကျေလည်အောင် တင်ပြနိုင်ဖို့ ခက်နေပုံပဲ။ ဆွေးနွေးပွဲကလည်း သူလည်းမဟုတ် ငါလည်းမဟုတ်နဲ့ ပြောရရင်တော့ ‘ ရွှေသမင် ဘ ယ်ကထွက် …’ ဆိုသလို ဖြစ်နေပြီလေ။ အဲ
’ ဆိုပြီး မပြောကြရုံတမယ်ပဲရှိတာ။
အစည်းအဝေးကြီးက အီလည်လည်တွေဖြစ်ပြီး အဖြေမရဖြစ်နေပြီ။ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး
တာဝန်ကြီးကြီးယူထားတဲ့ တိုင်းမှူးကြီးရဲ့ ကောက်ချက်ဆွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်လာပါပြီဗျာ။ အထက်ကို
မီဒီယာတွေကတဆင့် ဖော်ပြဖို့ … ပြောကြားလိုက်တာက
“နေပြည်တော်- မန္တလေး လမ်းမကြီး ပျက်ဆီးသွားသဖြင့် ဖွင့်ပွဲကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွေ့ဆိုင်း ကြောင်း၊ လမ်းပျက်ဆီးခြင်းသည် ဆည်ရေဖောက်သူများလည်း တာဝန်မရှိကြောင်း၊ အင်ဂျင်နီယာများလည်း အပြစ်ကင်းကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလည်း အပြစ်မရှိကြောင်း၊ မိမိတို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်သူများလည်း သဘာဝဘေးဒဏ်ကို ထည့်မတွက်မိသဖြင့် ဖြစ်ရခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာမှ သတ်မှတ်ကုန်ကျစားရိတ် များချပေးရာတွင်လည်း မိမိတို့အဆင့်ဆင့် တာဝန်ရှိသူများက သင့်တော်သလို ယူသင့်တာယူ သိမ်းသင့်တာ
သိမ်းပြီး လမ်းခင်းရန် ချပေးသင့်သလောက်ချပေးခဲ့သဖြင့် မိမိတို့တာဝန်ရှိသူများလည်း တာဝန်မရှိကြောင်း
အမှန်တကယ် အပြစ်ရှိသူ တာဝန်ရှိသူများမှာ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံအင်အားစုများနှင့် ပြည်ပမီဒီယာများကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း။ ၎င်းတို့က ဝိုင်းဝန်းသွေးထိုးသဖြင့် လမ်းသစ်ကြီးမှာ ယခုကဲ့သို့
နော်။ ကဲ
မူရင်း သတင်းစုံကို http://www.news-eleven.com/index.php
ရတနာပုံပေါ်တယ် က ဂူးဂဲကို ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီလား
မိုးမခစာဖတ်သူတဦး - ရန်ကုန် အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀
ဒီနေ့ ဂျီမေး၊ ဂျီတော့ခ် သုံးလို့မရတော့ဘူး။ Error Message က DNS က ပြသနာ ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အင်တာနက်ကလည်း အင်တာနှေး မဟုတ်တော့ဘူး၊ အင်တာပျက် ဖြစ်နြေ ပီ။ တနာရီလောက် လာပြီးရင်၂ နာရီ၃ နာရီပြတ်တယ်။ မီးပျက်တာနဲ့ အင်တာနက်က နင်လား၊ ငါလား ဖြစ်နေပါပြီ။ ရတနာပုံ တယ်လီပို့တို့၊ ဆက်သွယ်ရေးဌာနတို့ကို မေးတယ်။ မဖြေနိုင်ကြသေးဘူးဗျာ။ ကိုယ့်ဆိုင်ကနေ တခြားဆိုင်ကို သွားတော့ ဟိုက ပရိသတ်က ကိုယ့်ကို ပြန်မေးတယ်။ အကိုတို့ ဆိုင်က အင်တာနက်လာသလားတဲ့။ မလာဘူးလို့ ဆိုတော့ သူတို့ကလည်း အင်တာပျက်နေလို့ တခြားဆိုင်သွားကြမလို့တဲ့။ ကဲ … မခက်လား။ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာလို့ ထုံးစံအတိုင်း အင်တာနက်ကို ပိတ်ကြပြန်ပြီနဲ့ တူတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ဂူးဂဲက မေးတွေ၊ ချက်တွေကို သုံးလို့ မရတော့တာ မြန်မာစားသုံးသူတွေကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေတယ်။ ဆိုင်တွေလည်း စီးပွားပျက်တာပေါ့။ အခုအချိန်မှာတော့ လူတွေက ဂျီကျနေရင် မျက်နှာပဲ ကြည့်ကြရုံလို့ ဆိုတယ်။ သဘောပေါက်လား။ ဂူးဂဲမရှိတော့ရင် လူတွေက ဖေ့စ်ဘွတ်ကို သွားကြရုံလို့ ပြောတာပါ။ သို့သော် အင်တာပျက်နေမှတော့ ဘယ်မှ သွားလို့ မရတော့ဘူးလေ။ အယင် ၃ လ လောက်က ရတနာပုံ အတိုက်ခိုက်ခံရတာလားလို့လဲ ထင်ကြေးပေးတယ်။ အဲဒါတော့ မဖြစ်လောက်ဘူးလေ။ မြန်မာအိုင်အက်စ်ပီတွေထဲမှာ အာဏာရှင်နဲ့ အာဏာမဲ့တွေအတွက် ခွဲခြားဖို့ ရတနာပုံပေါ်တယ် ဆိုတာကို သူတို့ပဲ စလုပ်တာ။ သူကနေ နေပြည်တော်တို့၊ စစ်ရုံးတို့၊ တပ်မတော်တို့၊ အစိုးရရုံးတွေအတွက် သီးခြား နက်ဝပ်က တခု၊ ကျနော်တို့လို မျက်နှာမွဲ အင်တာပျက် နက်ဝပ်က တခု ခွဲပြီး ပေးနေတာလို့ ဆိုတာပဲ။ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးအောက်က တခုတည်းသော မိန်းအိုင်အက်စ်ပီပေါ့ဗျာ။ တလောကမှ သူတို့ပေါ်တယ်ကြီး ( မိန်းဝက်ဆိုက်) အောက်တိုဘာ ၁၇ မှာ ဖွင့်တယ်လေ။ သူတို့မေးက ၀ိုင်မေးဆိုလားပဲ။ ဂျီမေးကို ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဝိုင်မေးပေါ့ဗျာ။ ပြည်တွင်းက ဆိုက်တွေက မြန်မှမြန်။ ခင်ဗျားတို့ကတော့ ဘယ်သိမှာလဲဗျာ။ နောက်သတင်းတွေပို့ရင်ဓာတ်ပုံတွေမပါစေနဲ့။ အရမ်းနှေးတော့ ရောက်မလာပဲ လမ်းမှာတင် ကံကုန်သွားမှာစိုးလို့။ မြန်မာပြည်က ဓာတ်ပုံတွေပဲဗျာ … ကိုယ်တိုင်ပဲဘတ်စကားစီးပြီး သွားကြည့်လိုက်တော့မယ်လေ။
သင့် မိုးမခစာဖတ်သူတဦး ( ရန်ကုန်) ( မိုးမခမှတ်ချက် - ရတနာပုံတယ်လီပို့ကိုယ်တိုင် - http://yatanarpon.com.mm လည်း
ဒေါင်းနေပါတယ် အကိုရေ။ အပြင်လူမ၀ င်ရ၊ အတွင်းလူ မထွက်ရများ ဖြစ်နေပြီလား မသိပါ။ ဓာတ်ပုံ - Planet Myanmar က ရတနာပုံတယ်လီပို့ အဆောက်အအုံ။ )
စင်ပြိုင်အစိုးရ အလံကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ ခိုးယူ
မိုးမခအထောက်တော်အမှတ်၀၀၆ အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀
စင်ပြိုင်အစိုးရ အလံနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ နှစ်သက်သည့်အလံ
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးချယ်ခံရသူများသည် အာဏာအပ်နှင်းခြင်း မခံရသည့် အတွက် နယ်စ ပ်ဒေသတွင် စင်ပြိုင်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းပြီး ၂ နှစ်အကြာတွင် ထိုအလံကို ဒီဇိုင်းဆွဲ အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့က ထိုအလံကို ပုံတူကူးယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အလံ မတိုင်ခင်ကလည်း နိုင်ငံအာဏာကို ပြည်သူလူထု ရွေးချယ်ထားသည့် ၎င်းတို့ထံ လွှဲအပ်ခြင်း မရှိဘဲဆုတ်ကိုင်ထားခဲ့ကြောင်း စင်ပြိုင်အစိုးရမှ
လမ်းဖောက်၊ တံတားဆောက်ခြင်းအကြောင်းများကို ၀မ်းသာအားရ ပြောပြတတ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ကမူ
၎င်းတို့က ထို သုံးရောင်ခြယ် ကြယ်တပွင့် အ လံ ကို ၁၇ နှစ်ကြာ အချိန်ယူ ကျင်းပခဲ့သည့် အမျိုးသား
ထိုအလံပုံစံ ပါဝင်သော အခြေခံဥပဒေကို လူထုက တခဲနက် ထောက်ခံပြီးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က မကြာခဏ ထုတ်ဖော်လေ့ရှိသည်။
အံ့အားသင့်ခဲ့သည်။ ဧရာဝတီ၊ အလဲဗင်းမီဒီယာ အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် စာဖတ်သူများက
ထိုအလံသစ်ကို နိုင်ငံတော်အလံအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းကို မနှစ်သက်ကြောင်း စာရေးသား တုံ့ပြန်ကြသည်။
ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမ အလံသစ်တင်သည့် အစီအစဉ်တွင် ဦးဆောင်သူ မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်းက
ဦးအောင်သိန်းလင်းက အဘယ်ကြောင့် ထိုဖိနပ်ကို ထူးထူးခြားခြား အသုံးပြုရကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးပေ။
ဦးအောင်သိန်းလင်း ( ဓာတ်ပုံ- ဧရာဝတီ)
အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့က အလံဟောင်းဖြုတ်ချပြီး အလံသစ်တင်ခြင်းကို တနိုင်ငံလုံးတွင် အချိန်ကိုက် ပြုလုပ်ကြသည်။
ထိုအစီအစဉ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ အာဏာသက်ရှည်ရေးအတွက် ယတြာခြေခြင်းဖြစ်သည်ဟု အများအပြားက ယူဆသည်။
ရှေ့လဆန်းတွင် ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှ ဆုတ်ခွာမည်ဟု ယူဆသူမှာ တဦးတလေခန့်သာ ရှိသည်။
Burmese in Singapore say No to Regime's SHAM Election
Posted by MoeMaKa | 3:28 PM | Local News Headlines |0comments »
စက င်္ာပူက မြန်မာများကလည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အလိုမရှိ
မိုးမခအထောက်တော်စင်္ကာပူ အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချပွဲများကို ကမ္ဘာတလွှား နိုင်ငံအသီးသီး၌ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်လည်း လာမည့်အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်( စနေနေ့) ညနေ ၄ နာရီမှ ၅ နာရီအတွင်း စပီကာ ကော်နာ (Speakers’ Corner) ၌ “ ဖရီးဘားမားကမ်ပိန်း - စက င်္ာပူ” မှ ဦးဆောင်၍ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုပွဲတွင် စက င်္ာပူနိုင်ငံသားများနှင့် စင်္ကာပူရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအား ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန် အင်တာနက်စာမျက်နှာများ၊ ဘလော့ဂ်များ၊ အီးမေးလ်များနှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာများမှတဆင့် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ ကန့်ကွက်ပွဲသို့ တက်ရောက်ကြမည့်သူများအား မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများနှင့် တသွေးတသားထဲရှိခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အနီရောင် တီရှပ်များကို ဝတ်ဆင်လာကြရန် တိုက်တွန်းထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရသည် လာမည့်နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲကို မဖြစ်မနေ ကျင်းပရန် ပိုင်းဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရက ချမှတ်ထားသော ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအရ အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲတခု မဖြစ်လာနိုင်တော့သည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတကာနှင့်မြန်မာမိသားစုများက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလျက်ရှိသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အများအပြားမှာ စစ်အစိုးရ၏ မတရား ချုပ်ေ နှာင် ဖမ်းဆီးထားခြင်းကို ခံနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ တဖက်တွင်လည်း
မြန်မာပြည်သူများမှာ စစ်အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်း၊ အနှောက်အယှက်ပေးခြင်း တို့အောက်တွင် အစဉ်သဖြင့် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစွာ နေထိုင်နေရဂကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်သူများနှင့် တသွေးတသားတည်းရှိကြောင်း ပြသရန်အတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒအစစ်အမှန်ကို မထင်ဟပ်သော အဆိုပါ အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကို လာရောက် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြပါရန်တိုက်တွန်း ထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ ကြွေးကြော်သံမှာ “စစ်အစိုးရ၏ အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲ အလိုမရှိ” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ Facebook event page –
သီးညီနောင်နဲ့ မျိုးဆက်သစ်လှပျိုဖြူတို့က ၂၀၁၀ ကို စိန်ခေါ်
မိုးမခအထောက်တော် ချင်းမိုင် အောက်တိုဘာ၂၆၊ ၂၀၁၀
သီးညီနောင်နှင့် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် ( မြန်မာနိုင်ငံ) တို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်ခဲ့သည့် “ ၂၀၁၀ အနုပညာစိန်ခေါ်သံများ ” ကပွဲကို ချင်းမိုင်မြို့တွင် အောင်မြင်စွာ တင်ဆက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မြန်မာမှုရုပ်သေးအစီစဉ်များနှင့်အတူ၊ သီးညီနောင်အဖွဲ့သားများ ဦးဆောင် ပါဝင် ကပြသည့် “ ၂၀၁၀ ကြွတ်ကြွတ်အိတ်သံသရာ ” ပြဇာတ်သစ်ကိုလည်း တင်ဆက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ထူးထူးခြားခြားတင်ဆက်မှုအဖြစ် “၂၀၁၀ - မော်ဒန်အငြိမ့်ပွဲတော် အစီအစဉ်” ကို အမျိူးသမီး ဟာသလူရွှင်တော်များ ဖြစ်ကြသော “ ဆဲဆဲ၊ ကဲကဲ ၊ ငဲငဲ၊ ဘဲဘဲ ” တို့၏ ရယ်စရာ ဟာသပြက်လုံးများနဲ့အတူ မျိုးဆက်သစ် မင်းသမီးချောလေး “ သဲသဲ ” ၏ အကအလှများဖြင့် တင်ဆက်ရာ ပရိသတ်များ အားပါးတရ အားပေးခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးလူရွှင်တော်လေးများရဲ့ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအား သရော်ထားသော ဟာသပြကွက်များမှာ ပရိသတ်များ အထူးနှစ်ခြိုက်သဘော ကျခဲ့ကြသည်ဟု ပရိသတ်တဦးက ပြောပြသည်။
၂၀၁၀ - မော်ဒန်အငြိမ့်ပွဲတော် ဟာသပြက်လုံးများကို သီးညီနောင်အဖွဲ့သားများ ဖြစ်ကြသော ကြယ်သီး၊ ပန်းသီး၊ ဇီးသီး တို့က ရေးသားပေးခဲ့ကြပြီး၊ မင်းသမီးမြစပယ်ငုံက အကသင်ပေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
သီးညီနောင်အမည်ဖြင့် ရပ်တည်နေသော အနုပညာအဖွဲ၏ လက်ရှိအခြေအနေကို မေးမြန်းကြည့်ရာတွင် ၎င်းတို့၏ ဆရာဖြစ်သူ ကိုဇာဂနာ ( ကိုသူရ ) က ကိုယ့်အနုပညာတွေကို ၀ါသနာပါသည့် မျိုးဆက်သစ်များထံ တတ်နိုင်သမျှ ဖြန့်ဝေပေးရမည်ဟု မှာခဲ့ဖူးကြောင်း၊ အနည်းဆုံးတော့ ယခုကဲ့သို့ မိမိတို့ စုစည်းနိုင်သလောက်နှင့်ဝေမျှ လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်အောက်ကြိုးစားနေကြောင်း၊ အငြိမ့်နဲ့ ပြဇာတ်တိုက်ချိန်၂ ပတ် အတွင်း အခုလိုမျိူး အဆင်ပြေ အောင်မြင်သည့်အတွက် ကူညီပေးသူ မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း သီးညီနောင်က ပြောကြားလိုက်သည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း ( ရန်ကုန်) ၏ သတင်းမှတ်စု လှုပ်ရှားမှုများ
ကျော်သူ အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀
၂၃ . ၁၀ .၂၀၁၀ ( စနေနေ့) သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာနေ့တွင် အများပြည်သူတို့ ဘုရားသွား၊ ကျောင်းသွား ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို ပြုလုပ်နေကြသော်လည်း ကျွန်တော်တို့၏ နာရေးကူညီမှုအသင်း ( ရန်ကုန်) အသင်းသူ/ သားများနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် ( အခမဲ့) နာရေးကူညီမှု ( အခမဲ့) ဆေးဝါးကူညီမှု အစရှိသည့်
ထိုသို့ ထမ်းဆောင်ပေးဆပ်လျှက်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့ ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားကြီးတိုက်၊ ပတ္တမြား ကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာသီဟသည် ၂၁ . ၁၀ .၂၀၁၀ ( ကြာသပတေးနေ့) ညနေ ( ၆း၀၀ ) နာရီ အချိန်တွင် ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူ သွားပါ၍ ကြွင်းကျန်ရစ်သော ဥတုဇရုပ်ကလာပ်တော်အား သီတင်းကျွတ်လပြည့် ၂၃ . ၁၀ .၂၀၁၀ ( စနေနေ့) ညနေ ( ၃း၀၀ ) နာရီတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း ( ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူ ဦးဆောင်၍ အသင်းသူ/ သားများ၊ နာရေးကူညီမှု အသင်း( ရန်ကုန်) ဝတ်အဖွဲ့တို့ ပင့်ဆောင်ကာ ရေဝေးသုဿန်တွင် သင်္ဂြိုဟ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ပတ္တမြားကျောင်းဆရာတော်သည် ဥူးသုမင်္ဂလ ( ဒယ်အိုးဆရာတော်) ၏ ဆရာတော်ကြီး ဖြစ်တော်မူ၍ အန္တိမ ဈာပနအခမ်းအနားအား ဥူး သုမင်္ဂလမှ ဦးစီး၍ ကျင်းပပေးခဲ့ပါသည်။
အများသူငှာ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်ကြသော သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ( အဘိဓမ္မာနေ့) ၊ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ ( တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်) ၊ အမျိုးသားနေ့၊ ခရစ္စမတ်နေ့၊ လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ ပြည်ထောင်စုနေ့၊ တောင်သူလယ်သမားနေ့၊ တပ်မတော်နေ့၊ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲနေ့၊ သင်္ကြန်ပွဲတော်နေ့၊ အလုပ်သမားနေ့၊ အာဇာနည်နေ့ စသည့်နေ့ရက်များအပြင် အထူးပိတ်ရက်များ ဖြစ်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအား မဲဆန္ဒပေးသည့်ရက်၊ သဘာဝဘေးဒဏ်ခံရ၍ ကျောင်းများ၊ ရုံးများ ပိတ်သည့်ရက်၊ စက်တင်ဘာအရေးအခင်းနေ့ရက်များအပြင် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆန္ဒပေးမည့်နေ့ ရက်တို့တွင်လည်း တနှစ်ပတ်လုံး
ဟောင်းဘဝအထွေထွေ တော်စပ်ကြခဲ့သော မိခင်ဖခင် ဆွေမျိုးသားချင်း မိတ်သင်္ဂဟအပေါင်း တို့အား၎င်း၊ ယခုတော်စပ်ခပင်း ဆွေရင်းမျိုးခြာ မိဘမောင်ဘွား နှမသားချင်းများအား၎င်း၊ ကျွတ်သင့် ကျွတ်ထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအား၎င်း၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း( ရန်ကုန်) မှ ကူညီဖေးမ သင်္ဂြိုဟ် ပေးခဲ့သော မကျွတ်မလွတ်သေးသည့် သတ္တဝါအပေါင်းတို့အား၎င်း၊ ကျွတ်ရန်လွတ်ရန် စိတ်ရည်သန်၍ ဘုရား ရဟန္တာ ပစ္စေကာနှင့် အဂ္ဂသာဝက မဟာသာဝက ရဟန္တာ အရှင်သူမြတ်ကြီးတို့အား၎င်း၊ ထွက်ရပေါက်ဆရာတော်မြတ် ဘိုးတော်တို့အား၎င်း၊ သူရဿတီ စန္ဒီ စသောဒေဝီအပေါင်းတို့အား၎င်း၊ နတ်မင်းကြီး လေးပါးနှင့်တကွနတ်စစ်သူကြီးအပေါင်းတို့အား၎င်း၊ အာကာသဇိုး၊ ဘုမ္ပဇိုး၊ ရုက္ခဇိုး၊ တောစောင့်၊ တောင်စောင့်၊ မြို့စောင့်၊ နယ်စောင့်၊ ဘုရားစောင့် နတ်နဂါးအပေါင်းတို့အား၎င်း တိုင်တည် သစ္စာဆိုကာ ပြည်မြို့ ရွှေပေါက်ပင်ဆရာတော်ကြီး၏ ကျွတ်ပွဲလွတ်ပွဲ ကျင့်စဉ်ကို ၁၃၇၂ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ( ၇ ) ရက်နေ့မှစ၍ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့အထိ ( ၉ ) ရက်တိုင်တိုင် အကျွတ်အလွတ်ကျင့်စဉ် အသီးသီးတို့အား တနေ့လျှင် ပုတီးပတ်ရေ ( ၁၈ ) ပတ်ပြည့် ကျင့်ကြံအား ထုတ်ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့် ယနေ့ ၂၄ .၁၀ . ၂၀၁၀ ( တနင်္ဂနွေနေ့)
နံနက် ( ၉း၀၀ ) နာရီ အချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း( ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်ရှိရာ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ ၄၂ ရပ်ကွက်ရှိ ဘုရားခန်းမအတွင်း အသင်းသူ/ သားများ စုပေါင်း၍ အမျှအတန်း ပေးဝေပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ဘယ်လိုမှ လက်ခံ မယုံကြည်ပါ ဇာဝါရီ( မယ်ရီလန်)
အခုနာရီပိုင်းအတွင်း ထိုင်းသီချင်းတပုဒ်နားထောင်ဖြစ်ပြီး ဒီဆောင်းပါး ရေး ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ထိုင်း ပေါ့ ရော့ခ် နံမည်ကြီး အဆိုတော် ‘ ဘတ်ဒ်’ ထုံချိန် (‘Bird’ Tongchai) နဲ့ လိုဆို (Loso) တို့ တွဲဆိုထားတဲ့ “ဥံဖလမှ ဖု့ကော့ မိုက်ချူရက် ( อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ)” သီချင်းဖြစ်တယ်။ မြန်မာလို တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ပြန်ရင် “ ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကို ပါးစပ်ထဲငုံပြီး ကျိန်ဆိုပြောတောင်မယုံဘူး ” ဖြစ်ပါ တယ်။
ပြည်သူတွေ တခဲနက် ဆန္ဒမဲပေးပြီး ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်မပြု၊ သမိုင်းဖျက် မေ့ဖျောက်ခိုင်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေကို မတရား ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်း၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို နှစ်ရှည်အကျဉ်းချ ၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေကို ကန့်သတ်ချက် မတရားဥပဒေတွေနဲ့ တားမြစ်ဟန့်တားပြီး တပ်မတော် စစ်အစိုးရ အာဏာဆက်မြဲရေး အကွက်ချ ထားတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေ က ပါဝင်ဆင်နွှဲ မဲပေး ရမလား ?
နှစ်ပေါင်းများစွာ အလိမ်အညာ လည့်စားမှု၊ သွေးစုတ်ချယ်လှယ် ဖိနှိပ်ချူပ်ခြယ်မှုများနဲ့ တိုင်းပြည်ကို မွဲပြာအောင်လုပ်၊ ပြည်သူပြည်သားဘဝတွေကို ကြေမွဖျက်ဆီးလုပ်နေခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်တစုက နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူ တဖတ်သတ် ပြဌာန်းရေးဆွဲ ၊ ပြည်သူတွေနာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် သိန်းနဲ့ချီ သေကြေနေတဲ့အချိန်ကာလမှာ အတင်းအဓမ္မ မဲဆန္ဒကောက်ယူ၊ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ဆန္ဒပြုမဲပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီး အရှက်မရှိ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ ကို ပြည်သူပြည်သား တွေ က လက်ခံယုံကြည် အတည်ပြုပေးရမလား ?
အာဏာရှင် လက်ဝေခံ ကြံ့ဖွံ့ပါတီက နိုင်ငံတဝှမ်း မဲဆန္ဒနယ်မြေတိုင်းမှာ နိုင်ငံတော်စရိတ်တွေသုံး မဲဆွယ်လုပ်နေနိုင်ချိန် - မဲတပြားမလို မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၅၄ နေရာမှာ ကြံ့ဖွံ့အမတ်တွေ အလိုအလောက် အနိုင်ရနေ ချိန်။ အမှောင်တိုက်ထဲမှာ မျက်စိပိတ် နားပိတ် ပြည်သူတွေကို လောဘဇောတိုက် စီးပွားရှင်တွေ၊ ရပ်တည်ချက်ကင်းမဲ့ အနုပညာရှင်ေ တွ၊ ကြံ့ဖွံလက်ရုံးတပ်နဲ့ မက်လုံတွေပေး၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ၊ လှည့်ဖြားမှုတွေ၊ ဝါဒဖြန့်မှုတွေနဲ့ တပ်မတော် တံဆိပ်ခတ် အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲ ခေါ် အာဏာရှင် လက်သစ် ကောက်ရွေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေက ယုံကြည်စွာနဲ့ မဲသွားပေးရမလား ?
ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ နဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေ တောင်းဆိုတိုက်တွန်းနေတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ ဥပေက္ခာပြု။ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ နဲ့ ပြည်ပမီဒီယာများ သတင်းဝင်ယူခွင့် မပြောနဲ့ ပြည်တွင်း သတင်းထောက်တွေတောင် ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း လွတ်လပ်စွာ ရေးခွင့်မရ၊ရွေးကောက်ပွဲနေ့ မဲရုံးတွေသွား သတင်းယူခွင့်မရ ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်မရှိ၊ မဲဆန္ဒရှင်တွေကို မေးခွင့်မပြု။ လုံးဝဥသုံ ဘာဆိုဘာမှ လွတ်လပ်ခွင့်မရှိ၊ တရားမျှတမှု မရှိမယ့် ဒီ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူတွေက ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လက်ခံရမလား ?
ပြည်သူတွေ စိတ်ဝင်စားမစား၊ နားလည်မလည်၊ ကြောက်လို့ဖြစ်ဖြစ်၊ အပြောင်းအလဲထွက်ပေါက်တခုလို့ မျှော်ကိုးမကိုး၊ မဲထည့်မထည့်အနိုင်အရှုံး မဲ ရေတွက်စရာမလို တပ်မတော်ရဲ့  ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အနိုင်ရကြေညာပြီး ဗိုလ်ချုပ်တွေပဲ အစိုးရသစ် ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်။ စစ်ဝတ်စုံချွတ် ခေါင်းပေါင်း၊ တိုက်ပုံတွေနဲ့ လူမပြောင်း၊ မူမပြောင်း၊ ဘာဆိုဘာမှ မပြောင်းဘဲ လူထုကို ဆထက်တပိုး နှိပ်စက်ဗိုလ်ကျ၊ တိုင်းပြည်ကို ပိုမွဲအောင် လုပ်မယ့် ဒီမိုကရေစီအမည်ခံ အစိုးရသစ်ကို ပြည်သူတွေက ယုံကြည်လက်ခံ အသိအမှတ်ပြုရမလား ?
ဒီလိုအခြေအနေ၊ အခုမပြောင်း နောက်မပြောင်း တိုင်းပြည်အကျိုး၊ ပြည်သူအကျိုး၊ နိုင်ငံတကာအကျိုး မရှိတဲ့ အခြေမခံတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ၊ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲ၊ ပေါ်ပေါက်လာမယ့် အာဏာရှင် ရုပ်သေး အစိုးရသစ် တို့ကို ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံသားတွေက တညီတညွတ် တသံတည်း စစ်အာဏာရှင်တို့ အနေနဲ့ ဘုရား ရုပ်ပွားတော်ကို ပါးစပ်ထဲငုံပြီး ကျိန်ဆိုပြောတောင် ကျုပ်တို့ကတော့ အခုလည်းမယုံဘူး။ နောင်လည်း လက်မခံဘူး။ ဘယ်လိုပြောပြော မယုံဘူးလို့ ဟစ်ကြွေးလိုက်ကြပါစို့ ။ ။
( อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ သီချင်းကို @ http://www.youtube.com/watch?v=wSC0gtfqXoo
31st Jan 2013 - MoeMaKa Daily
30th Jan 2013 - MoeMaKa Daily
29th Jan 2013 - MoeMaKa Daily
26th Jan 2013 - MoeMaKa Daily
ABMA Journal Volume4No 1
Mining Project, Water Quality and Letpadaung in Burma - Maung Kyay Yay (California)
ABMA Journal Volume3No 24
11th Dec 2012 - MoeMaKa Daily